पुल तर्न रु दश शुल्क ! – Ketaketi Online
पुल तर्न रु दश शुल्क !
December 13, 2021 December 13, 2021 Ketaketi OnlineLeaveaComment on पुल तर्न रु दश शुल्क !
पुल तर्दा रु १० शुल्क लाग्छ भन्दा जो कसैलाई अचम्म लाग्न सक्ला तर तनहुँको मादी नदीमाथि बनाइएको पुल तर्दा शुल्क तिर्नुपर्छ । व्यास नगरपालिका– ५ बेनीपाटनमा सोही वडा स्थित पाटन युवा क्लबको आयोजनामा प्रथम दमौली पाटन सांस्कृतिक एवं पर्यटन महोत्सव यही मङ्सिर २४ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
मादी नदीमाथि झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको भए पनि पुलको मुखमा प्रहरी राखेर सीमित मानिस मात्रै आवतजावतका लागि व्यवस्था मिलाइएको छ । महोत्सवमा हुनसक्ने दर्शकको भीडलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय बोटे समुदायले मादी नदीमाथि बाँसको अस्थायी पुल निर्माण गरेका हुन् ।
पाटन बोटे समाजका अध्यक्ष टेकबहादुर बोटेको सक्रियतामा करिब ३५ जना बोटेद्वारा दुई दिन लगाएर बाँसको पुल निर्माण गरिएको बताउनुभयो । भैरव बोटे, लोके बोटे, उत्तम बोटे, डिले बोटेलगायतका स्थानीय बोटेको सक्रियतामा बाँसको अस्थायी पुल निर्माण गरिएको हो । व्यास–३ को व्यासगुफाबाट व्यास– ५ को पराशर आश्रम निस्कने गरी निर्माण गरिएको पुलबाट महोत्सवस्थल जानका लागिसमेत छोटो दूरी पर्दछन् ।
बाँसको पुल तर्दा लिइएको रु १० ले सीमान्तकृत बोटे समुदायको सामाजिक कार्यमा खर्च गर्ने उद्देश्य राखिएको स्थानीयवासी मङ्गलबहादुर बोटेले जानकारी दिनुभयो । – रासस
शिक्षामन्त्री कक्षाकोठामा प्रवेश गर्नुभयो
पाकिस्तानमा खतरनाक ‘भिडियो गेम’ लाई प्रतिबन्ध लगाउन सिफारिस पठाउने निर्णय